Aịzaya 24 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jehova ga-eme ka ala a tọgbọrọ nkịtị (1-23)
Jehova abụrụla Eze na Zayọn (23)
24 Jehova ga-eme ka ala* a tọgbọrọ nkịtị, meekwa ka ọ bụrụ ebe e bibiri ebibi.+ Ọ ga-atụgharị ya,+ chụsasịakwa ndị bi na ya.+ 2 Otú ihe ga-adịrị otu onye ka ọ ga-adịrị ibe ya: Ma ndị nkịtị ma onye nchụàjà,Ma onye na-eje ozi ma nna ya ukwu,Ma nwaanyị na-eje ozi ma nne ya ukwu,Ma onye na-azụ ihe ma onye na-ere ere,Ma onye na-agbazinye ihe ma onye na-agbaziri agbaziri,Ma onye e ji ụgwọ ma onye ji ụgwọ.+ 3 A ga-eme ka ala a tọgbọrọ nkịtị. A ga-ebukọrọ ihe dị na ya,+N’ihi na Jehova ekwuola ya. 4 Ala a na-eru uju.*+ O nweghịzi uru ọ bara. Elu ala akpọọla nkụ. Ike agwụla ya. Ndị ukwu nọ n’ala a ataala ahụ́. 5 Ndị bi n’ala a emerụọla ya,+N’ihi na ha emebiela iwu,+Gbanwee otú e kwesịrị isi na-eme ihe,+Mebiekwa ọgbụgba ndụ gaara adịte aka.*+ 6 Ọ bụ ya mere e ji bụọ ala a ọnụ, ya alaa n’iyi.+ Ikpe makwara ndị bi na ya. Ọ bụ ya mere ndị bi na ya ji belata,Mmadụ ole na ole afọdụzie na ya.+ 7 Mmanya ọhụrụ na-eru uju.* Osisi vaịn akpọnwụọla.+ Ndị niile obi na-atọbu ụtọ na-asụzi ude.+ 8 Aṅụrị a na-enwe ma a kụwa obere ịgbà akwụsịla. Mkpọtụ nke ndị na-eme oriri akwụsịla. Aṅụrị a na-enwe ma a kpọwa ụbọ akwara akwụsịla.+ 9 Ha anaghịzi agụ egwú mgbe ha na-aṅụ mmanya. Mmanya na-eluzi ndị na-aṅụ ya ilu. 10 E meela ka obodo na-enweghịzi ndị bi na ya ghasaa.+ E mechiela ụlọ niile ka mmadụ ghara ịbanye na ha. 11 Ha na-eti mkpu ákwá n’okporo ámá n’ihi ụkọ mmanya. Aṅụrị niile a na-enwe akwụsịla. Aṅụrị a na-enwe n’ala a akwụsịla.+ 12 E meela ka obodo a ghọọ ikpo nkume. A kụọla ọnụ ụzọ ámá ya righirighi, ya aghọọ ikpo nkume.+ 13 N’ihi na otú a ka ọ ga-adị ná mba ndị ọzọ n’ụwa a: Ọ ga-adị ka mgbe a kụtuchara mkpụrụ dị n’osisi oliv,+Ọ ga-adịkwa ka mkpụrụ ole na ole fọrọ n’osisi vaịn mgbe a ghọchara mkpụrụ ya.+ 14 Ndị mmadụ ga-eti mkpu ọṅụN’olu dara ụda. Ha ga-esi n’oké osimiri* kọsaa na Jehova dị ebube.+ 15 Ha ga-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ+ too Jehova. Ha ga-esikwa n’agwaetiti oké osimiri too aha Jehova, bụ́ Chineke Izrel.+ 16 Anyị na-anụ egwú a nọ ebe ụwa sọtụrụ na-agụ: “Ka E Too Onye Ezi Omume!”+ Ma m sịrị: “Nke m na-eme agwụla. Nke m na-eme agwụla! Efuola m! Ndị aghụghọ aghọọla aghụghọ. Ndị aghụghọ aghọọla aghụghọ.”+ 17 Ndị bi n’ala a, unu ga-atụ ụjọ, daba n’olulu, maakwa n’ọnyà.+ 18 Onye ọ bụla nke na-agba ọsọ n’ihi mkpu na-emenye ụjọ a na-eti ga-adaba n’olulu. Ọnyà ga-amakwa onye ọ bụla nke si n’olulu ahụ na-apụta,+N’ihi na a ga-emeghe ọnụ ụzọ mmiri nke dị n’elu. Ntọala niile nke ala a ga-amakwa jijiji. 19 Ala a agbabiela. A yọgharịala ya. Ọ na-amazi jijiji.+ 20 Ala na-adagharị ka onye mmanya na-egbu. Ọ na-ete kweke kweke ka obere ụlọ ifufe na-ebugharị. Mmehie ya na-anyịgbukwa ya.+ Ọ ga-ada. Ọ gaghịkwa ebilite ọzọ. 21 N’oge ahụ, Jehova ga-elebara ndị agha nọ n’elu anya,Lebakwara ndị eze nọ n’ụwa anya. 22 A ga-achịkọta haOtú e si achịkọta ndị mkpọrọ n’olulu. A ga-akpọchikwa ha n’ụlọ mkpọrọ. A ga-elebara ha anya ma ọtụtụ ụbọchị gachaa. 23 Jehova nke ụsụụ ndị agha abụrụla Eze+ n’Ugwu Zayọn+ nakwa na Jeruselem. Ọchịchị ya ga-adị ebube n’anya ndị okenye ndị ya.*+ N’ihi otú ọchịchị ya si dị ebube, ọnwa gbazuru agbazu ga-agba ọchịchịrị. Anyanwụ na-achasi ike ga-agbakwa itiri.+
^ Ma ọ bụ “ụwa.”
^ O nwere ike ịbụ, “akpọọla nkụ.”
^ Ma ọ bụ “ọgbụgba ndụ oge ochie.”
^ O nwere ike ịbụ, “ataala.”
^ Ma ọ bụ “n’ebe ọdịda anyanwụ.”
^ Na Hibru, “n’anya ndị okenye ya.”